REENOEMANN: October 2009
Posted by Ree Noe Mann at 8:55:00 PM 16 comments:
ရင်ကို စုံကန်သွားတဲ့ နင့်ကို
ငါ မေ့လို့ မရဘူးဟာ..........
ဘယ်တော့မှ ပြန်မလာမှန်း သိပေမယ့်
ငါ့ရဲ့ နှလုံးသားက နင့်ကို
သစ္စာရှိနေတယ် ဆိုတာ သိစေချင်တယ်ဟာ.....
နင့်ကို ထာဝရ ချစ်နေမဲ့
နင့်ရဲ့ .............. ။
Posted by Ree Noe Mann at 4:00:00 AM 13 comments:
ဆရာမနုနုရည် (အင်းဝ) ရဲ့ ပြုံး၍လည်း ကန်တော့ခံတော်မူပါ ရယ်၍လညး ကန်တော့ခံတော်မူပါ။
ညီလေး သားကြီးမှ တောင်းဆိုထားသောကြောင့် တင်ပေလိုက်ရပါတယ်။ ညီလေး သားကြီးရေ စာတွေက များလွန်းလို့ အကို မရိုက်နိုင်တော့လို့ ခုလိုလုပ်ပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် အဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်ပါတယ် ကွာ။
( ဝန်ခံချက်) ဆရာမရဲ့ စာအုပ်ကို ကျနော် နှစ်သက်သောကြောင့်၎င်း၊ ကျနော့်ဘလောဂ့်လေးတွင် လာရောက်စာလာဖတ်ကြသော ကျနော် ညီအကိုမောင်နှမများရဲ့ တောင်းဆိုချက်ကြောင့်၎င်း၊ ကျနော့် ဘလောဂ့်လေးတွင် အမှတ်တရရှိစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး Can't Catch Group ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နှင့် ဆရာမရဲ့ စာအုပ်လေးအား ပိုစ့်အဖြစ် တင်ရပါကြောင်း ဝန်ခံအပ်ပါသည်။
Posted by Ree Noe Mann at 7:57:00 PM9comments:
Posted by Ree Noe Mann at 12:54:00 PM3comments:
မျက်ဝန်းအစုံ ပေါင်းများစွာထဲကမှ သတိထားမိသွားတဲ့ မျက်ဝန်းတစ်စုံကို ရည်ရွယ်ပြီးတော့ ဒီပိုစ့်လေးကို ရေးလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်က စကားကိုသိပ်များများပြောတက်တဲ့ လူစား မဟုတ်ဘူးလို့ ကိုယ်ကိုကိုယ် ထင်ထားခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျနော် ချစ်သော ၊ကျနော်က ခင်သော မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း မောင်နှမများ ကို ကျနော်နဲ့ တွေ့ ဆုံတဲ့ အချိန်ခဏလေး အတွင်းမှာတော့ ပျော်ရွင်စေချင်တာ ကျနော်ရဲ့ စိတ်စေတနာ အမှန်ပါ။ ဒါကြောင့်လည်း ကျနော်က ဖော်ဖော်ရွေးရွေး နေခဲ့ပါတယ်။
ကျနော်နဲ့ တွေ့တဲ့ အခါမှာ ကျနော်ကြောင့် စိတ်ညစ်သွားကြမှာ၊ စိတ်ပျက်သွားကြမှာကို မလိုလားပါဘူး။ ဒါကိုတော့ ကျနော် အတက်နိုင်ဆုံး ဂရုစိုက်ပြီးနေပါတယ်။ ဒီလိုဂရုစိုက်ပြီးနေတဲ့ ကြားကမှ
ဖြစ်တယ်ဆိုသလို ကျနော်ရဲ့ အပြောမတက်မှူကြောင့် အဓိပ္ပါယ် ပါပါနဲ့ ကြည့်လိုက်တဲ့ မျက်ဝန်းတစ်စုံကို သတိထားမိပြီ စိတ်ထဲမှာ နေမရထိုင်မရဖြစ်နေလို့ ခုလိုပိုစ့်လေး ရေးချပြီး တောင်းပန်လိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၄င်း မျက်ဝန်းတစ်စုံမှ ဒီပိုစ့်လေး အားဖတ်မိသွားပါက ကျေနပ်ပေးပါလို့ ကျနော် အနေနဲ့ အနူးအညွှန့် တောင်းပန်လိုက်ရပါတယ်ဗျာ။
P.S - အဓိပ္ပါယ်ပါသော အကြည့်ဖြင့် ကျနော်အားကြည့်သော မျက်ဝန်းတစ်စုံ အားရည်ရွယ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Posted by Ree Noe Mann at 8:00:00 PM 17 comments:
အဖေသူကြီး ရှိစဉ်အခါကတည်းက ရွာကျောင်းမှာ ဆွမ်းစားကျောင်း လှူခဲ့သည်။ စာသင်ကျောင်း ဆောက်သည်။ ရွာဦးဇရပ် ဆောက်လှူသည်။ ရေတွင်း နှစ်တွင်း၊ ရွာလယ် တံတားတွေ အသစ် တည်ပေးခဲ့သည်။ ကျောင်းသုံး ပရိဘောဂတွေဆိုတော့လည်း မအိမ်ကံပင်။ ဆရာတော်ကြီး ဈာပနမှာလည်း မအိမ်ကံတို့ပင် နင့်နင့်နဲနဲ မတည်ခဲ့ရသည်။
အခုလည်း အမေပန်းရုံက စာသင်ကျောင်းကလေး ပြန်ဆောက်ချင်သည် ဆိုတော့ မအိမ်ကံ မဖြစ်ဖြစ်အောင် ဆောက်လှူရတော့မည်။ အမေ ပန်းရုံခမျာ အသက်ရရှာပြီ။ သူလှူချင် သည်ဆိုတာကို မအိမ်ကံ ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးဖို့သာ ရှိပါ၏။ မီးလောင်သည့်ညကပင် သည်ကျောင်းကို ငါပြန်ဆောက်လှူ မယ် ပြောခဲ့တာ မအိမ်ကံအသိ။ မအိမ်ကံကလည်း လှူချင် သည်။ မအိမ်ကံကျောင်းကို မအိမ်ကံ ပြန်လည် တည်ထောင် ရမည်။ သည်လို ကိစ္စတွေမှာ ကိုပြေသိမ်းကို အိမ်သားအဖြစ် အသိပေးခြင်းသာ ရှိ၍ မအိမ်ကံကပဲ ဆုံးဖြတ်လေ့ ရှိ၏။ ကိုပြေသိမ်းကလည်း မအိမ်ကံ လုပ်ချင်တာ မှန်သမျှ ကန့်ကွက် တာမျိုး၊ တားတာမျိုး မရှိခဲ့။ “အိမ်ကလေး သဘောပါ”လို့ ဆိုသည်ချည်းပင်။ အစစအရာရာ ရှားပါးနေချိန်တွင် မအိမ်ကံ တစ်ချီတစ်မောင်း ရုန်းထဖို့ တော်တော် ကြိုးစားရမှာကိုလည်း သိပါ၏။ သို့သော် မအိမ်ကံ ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီ။
ကိုပြေသိမ်း မရှိသည့် တစ်ရက်တွင် အစ်ကိုလေး ကိုစံကောင်းကို မအိမ်ကံ အခေါ်ခိုင်းလိုက်သည်။ ကိုစံကောင်းက အမေပန်းရုံ၏ အစ်ကို ၀မ်းကွဲက မွေးသည့်သား ဖြစ်သည်။ ရွာမှာပဲ နေထိုင်သူ ဖြစ်၍ မအိမ်ကံတို့ အိမ်အလုပ်တွေ မနိုင်တိုင်း ကိုဖိုးငွေတို့နှင့် လာဝိုင်းတတ်သူဖြစ်၏။ မဟုတ်မခံ စိတ်ရှိသည့် အပြင် မအိမ်ကံကိုလည်း ချစ်ရှာသည်။
ကိုစံကောင်း ရောက်လာတော့ မအိမ်ကံက သရက်ပင်အောက် ခေါ်လာခဲ့သည်။
“ကိုင်း...ငါ့နှမ ပြောစမ်း။ ဘာများပါလိမ့်”
“ကိုဖိုးညောင်းနဲ့ ကိုစံမြကို ခေါ်ပေးစေချင်လို့။ မအိမ်ကံ နည်းနည်းပါးပါး မေးစရာရှိလို့ပါ အစ်ကိုလေး”
“ဖိုးညောင်းနဲ့ စံမြ ဘာလုပ်ဖို့လဲ။ သည်ကောင်တွေကို ပြောစရာရှိရင် ငါ့မှာလိုက်လေ။ ပိုက်ဆံ ရစရာရှိလို့လား”
“မဟုတ်ပါဘူး အစ်ကိုလေးရယ်။ မအိမ်ကံ သိချင်သာ ရှိလို့ပါ”
“အေးလေ ခေါ်ဆို ခေါ်ပေးပါ့မယ်။ သည်ကောင်တွေ ဘယ်များ ရှိမှာပါလိမ့်။ တောထဲတော့ မဆင်းလောက်ဘူး။ တွေ့သာနဲ့ ငါခေါ်ခဲ့မယ်ဟာ။ ကိုင်း...”
“ကနေ့ပဲ ရှာခေါ်ခဲ့နော်။ ကိုပြေသိမ်း မသိစေချင်လို့”
နေ့ခင်းနာရီပြန် နှစ်ချက်လောက်မှာ ကိုစံကောင်းနှင့် အတူ ကိုဖိုးညောင်းတို့ ပါလာခဲ့သည်။ မအိမ်ကံက သရက်ပင် အောက်ကိုပဲ ခေါ်လာခဲ့ပါ၏။ မအိမ်ကံ ဘာတွေများ မေးချင်လို့ပါလိမ့် ဆိုတာကို ထူးဆန်း နေကြပုံတော့ ပေါ်သည်။ မအိမ်ကံက စကားခံ မနေတော့ဘဲ လိုရင်းကိုသာ မေးတော့သည်။
“ကိုရင် ဖိုးညောင်း၊ မအိမ်ကံ မေးမယ်။ ဖြည်းဖြည်းဖြေ။ စဉ်းစားပြီး ဖြေနော်။ မီးလောင်တဲ့ ညက ကိုရင်ဖိုးညောင်း မြင်သာ ပြန်ပြောစေချင်သာပါ။ တစ်ချက်ချင်း စဉ်းစားဖြေနော်။ ကဲ...ပြော”
“ငါပြောပြီးသားပဲ ငါ့နှမရာ။ ဟိုညက နင်လည်း ကြား ပြီးသားပဲ။ အဲသာပဲရှိသာ။ နောက်ထပ် ငါဘာမှ မသိဘူး။ ဘုရားစူးရပါစေ့ဟာ”
မအိမ်ကံ ချက်ချင်း သိလိုက်ပြီ။ ကိုဖိုးညောင်းတို့ကို မအိမ်ကံ ခေါ်မေးတာကိုပဲ သူတို့ကို မသင်္ကာလို့ ခေါ်မေးတယ် ထင်ကြပြီ။ မျက်စိမျက်နှာတွေများ ပျက်လို့။ လူအများ ရှေ့မှာ သိသလောက် ပြောပြီးသားကိစ္စ။ မအိမ်ကံက တစ်ချက်ချင်း ပြန်ပြောပါဆိုတာကို လန့်နေကြပုံလည်း ပေါ်ပါ၏။ မအိမ်ကံက သူ့သဘောထားကို ပြောပြရတော့သည်။
“သည်လိုပါ ကိုရင်ရဲ့။ အခုကိစ္စက ရွာလည်း သိက္ခာ ကျသယ်။ မအိမ်ကံလည်း အစော်ကား ခံရလေခြင်းလို့ ခံစား ရသယ်။ အခု ကိုရင်တို့ကို ခေါ်သာလည်း မယုံတာ၊ မသင်္ကာ တာ မရှိရပါဘူး။ စကားဆိုသာ ကျန်တတ်သယ် မဟုတ်လား။ မအိမ်ကံ သိချင်သာပဲ မေးပါတော့မယ်လေ။ အဲသည် နေ့က မြင်းနောက်က စီးလာသူဟာ အရပ်ပုသယ်။ ဟုတ်သယ်နော်”
“အေးဟ။ ရှေ့က စီးသဲ့ကောင်ကို နောက်ကကောင်က ဖက်ထားသာ တွေ့သယ်။ နောက်ကကောင်က တော်တော့်ကို အရပ်ပုသယ်။ ငါမြင်ရသာက အလင်းရောင် ရှိသေးသာကိုး။ ဘုန်းကြီးပျံပွဲက ဒုံးလွှတ်ပြီး မကြာဘူးလေ။ ပွဲက ဧည့်ခံ ဆိုင်းတီးနေပြီဟာ”
“ဟုတ်ပြီ။ နောက်ကလူက မျက်နှာသုတ် ပ၀ါတစ်ထည် ကုပ်ကို ခွထားသယ်။ မြင်းစီးရင် လေလွင့်မှာစိုးတော့ အစ နှစ်ဖက်ကို အင်္ကျီထဲ တစ်ဖက်စီထိုးထည့်ထားသယ်။ ဟုတ်ကဲ့လား”
ကိုဖိုးညောင်း တွေသွားသည်။ လည်ကြီးစောင်းကာ ထိုညနေက အဖြစ်ကို ပြန်စဉ်းစားနေသည်။ ကိုစံကောင်းကတော့ မအိမ်ကံ ဘာတွေ မေးနေမှန်းမသိ။ မျက်နှာသုတ်ပ၀ါ ကုပ်ခွထားတာကို ဘယ်လိုများ သိတာပါလိမ့်။ ဥာဏ်မမီ တော့လည်း အသာငြိမ်နေလိုက်ရ၏။ ကိုဖိုးညောင်းဆီက အသံ မထွက်သေး။ ပြီးမှ မအိမ်ကံကို မျက်လုံးပြူးကြည့် သည်။ စုန်းမနှင့်တွေ့နေရပုံမျိုး။
“ဟုတ်သယ်၊ ငါ့နှမရေ။ ပ၀ါတစ်ထည် ကုပ်မှာပါသယ်။ ဟုတ်သယ်၊ ဟုတ်သယ်၊ သေချာသယ်”
“ဟုတ်ပြီ။ ကိုင်း...ကိုစံမြကို တစ်ချက်ပဲ မေးမယ်။ မြောက်တံခါးက ထွက်သွားတော့ မြင်းနှစ်စီး လူနှစ်ယောက်တည်း ဆိုသာ သေချာရဲ့လား”
ကိုစံမြက တစ်အောင့်ပဲ စဉ်းစားကာ သေချာကြောင်း ပြောခဲ့ပါ၏။ မအိမ်ကံ ကျေနပ်သွားသည်။ ကိုစံကောင်းတို့ သုံးဦးကို ပုဆိုး တစ်ကွင်းစီ ပေးလိုက်သည်။ မအိမ်ကံ တွက်သည့် ကိန်းတော့ တည့်တည့်ကြီး တိုးနေပါပကော။ ကိုစံကောင်းတို့ကို သည်ကိစ္စ ဘယ်သူ့မှ မပြောစေချင်ကြောင်း အထပ်ထပ်မှာတော့ မပြောဖို့ ကတိပေးကြကာ ပြန်သွားကြသည်။ တစ်ချက်ပဲ မေးစရာကျန်တော့သည်။ မအိမ်ကံ ရက်ကန်းရုံဘက်ကို လာခဲ့ကာ အရီးကြာညွန့်နှင့် စကားတွေ ပြောနေခဲ့သည်။ အရီးကြာညွန့်က ခေါင်းတညိတ်ညိတ်။ ထိုညက မနက်မိုးလင်းမှာကို မအိမ်ကံ စောင့်နေခဲ့သည်။ အရီး ကြာညွန့်လာမည့် အချိန်ကို စောင့်နေခဲ့သည်။ မနက်ဆွမ်းခံ ပြန် မောင်းတီးတော့မှ အရီးကြာညွန့် ရောက်လာခဲ့ပါ၏။ အရီးကြာညွန့် ၀င်းတံခါးဝ ရောက်သည်နှင့် မအိမ်ကံ ပြေးတွေ့သည်။ သိချင်လှပြီ မဟုတ်လား။
“မနေ့ညက အရီး သွားခဲ့သယ်။ မရောက်သာ ကြာပါပြီ အေရယ်။ မစံရွှေကြီး အတော်မမာ နေရှာသာကော။ စိတ်ထောင်း ကိုယ်ကြေဖြစ်ထင်ပါရဲ့။ စီးပွားကလည်း ကျ၊ လူကလည်း အိုပြီပဲ။ အရီးရောက်သွားတော့ နှိပ်ခိုင်းလို့ နှိပ်ပေးခဲ့ရသေးသယ်။ “န”နေရှာပါပြီအေ”
“အသက်ရှူ မ၀သာတဲ့။ ပါးစပ်က ဟစိဟစိနဲ့ အသက် ရှူနေရရှာသယ်။ ဗမာဆရာနဲ့တော့ ကုနေသယ်ပြောသာပဲ။ ရွာထဲလည်း ပြောသံမကြားပါဘူးအေ။ ခက်သာက သူတို့ကလည်း ဘယ်သူမှ လူမထင်ကြဘူးအေ့”
မအိမ်ကံက သိချင်တာကို အလျင်စလို မေးလိုက်သည်။ ကြီးတော်စံရွှေတို့ အိမ် ဒါမှမဟုတ် သာအောင်နှင့် ရွှေမှုံတို့ ခွဲနေသည်ဆိုသော အိမ်၊ တစ်အိမ်အိမ်မှာ မအိမ်ကံ မျှော်လင့် ထားသော လူတစ်ယောက် ရှိရမည်ဟု တွက်ထားခဲ့သည်။ အရပ်ပုပုဆိုသူ လူက ဘုန်းကြီးပျံပြီးတာနှင့် ပြန်ချင်လည်း ပြန်သွားနိုင်သည်။ ရှိချင်လည်း ရှိနိုင်သည်။ မအိမ်ကံက မြားတစ်ချောင်း ပစ်ကြည့်လိုက်ခြင်း ဖြစ်၏။ အရီးကြာညွန့်က မဖြေသေးဘဲ အနားက ထင်းပုံပေါ် တက်ထိုင်သည်။ စကား များများ ပြောစရာ ရှိသည့်ပုံ။ မအိမ်ကံကလည်း လိုက်ထိုင် လိုက်သည်။ မလှအုံကပင် “တူအရီးနှစ်ယောက် နေစရာ ထိုင်စရာ ရှားလို့တော်”လို့ လှမ်းအော်နေပါ၏။
“အရီး ရောက်သွားတော့ အကောင်ပု မရှိတော့ဘူး။ သည်လိုအေ။ အရီးပြန်မယ် လုပ်တော့ မစံရွှေက သူ့ချွေးမ အကြီးမကို ဆန်သုံးပြည် ထည့်ပေးလိုက်စမ်းလို့ ခိုင်းတော့ ကွမ်းတောင်ကိုင်မ မိကြည်သန်းက ဆန်လိုက်ခြင်ပေးသယ်။ ဒါနဲ့ အရီးက ညည်းတို့အိမ် ဟိုရက်က အရပ်ပုပုနဲ့လူ တစ်ယောက် တွေ့ပါသယ်။ သူရင်းငှားလားဆိုတော့ မဟုတ်ဘူးတဲ့။ အမေ့တူတဲ့၊ တူဆိုပေသိ ခပ်ဝေးဝေးထဲကပါတဲ့။ သမုန်းကိုင်းက ခဏလာနေသာတဲ့။ ကိုယ်မကောင်းဘူးလို့လည်း ပြောသယ်။ မအိမ်ကံပြောသဲ့ အရပ်ပုပုလူဆိုသာ အဲသည်ကောင် ဖြစ်မှာပဲ”
ဟုတ်ပြီ။ အကုန်လုံး ထင်ထားသည့် အတိုင်း ဖြစ်နေခဲ့ပြီ။ မြဲရာ သံပတ် ကျပ်ရာသပ်ပင်း သည့်ထက် ခိုင်စရာ မရှိ။ မအိမ်ကံ ကျောင်းကို မီးရှို့ခိုင်းတာ သင်းပဲဖြစ်ရမည်။ ကိုယ်ရေရောဂါသည်၊ သမုန်းကိုင်းသား၊ လည်ပင်းမှာ တဘက် တစ်ထည် ခွတင်ထားတတ်တဲ့လူ။ အရပ်ပုပု။ သမုန်းကိုင်းကို မအိမ်ကံ ငယ်ငယ်က ရောက်ဖူးသည်။ ဇောင်ချမ်းကုန်းနှင့် ဝေးလှသည်။ ကြီးတော် စံရွှေနှင့် သွေးဝေးသော တူတော်သူ၊ ဇောင်ချမ်းကုန်းကို အရောက်အပေါက် နည်းသူလည်း ဖြစ်ပြန်ဆိုတော့ လက်ထောက်ချခိုင်းလိုက်တာ ဖြစ်မည်။ ထားပါဦးတော့။ ဘာဖြစ်လို့များ စာသင်ကျောင်း ကလေးကို မီးရှို့ရတာလဲ။ အရီးကြာညွန့်က ဆက်ပြောနေပြန်ပါ၏။
“မအိမ်ကံ၊ ညည်းက ငါ့ကျေးဇူးရှင်ပါအေ။ ငါမှန်သဲ့ စကားတစ်ခွန်းတော့ ပြောစမ်းပါရစီ။ မစံရွှေဆိုသာကလည်း ငါ့ကို ကျွေးမွေးနေသာပါပဲ။ သူတကာ့အပေါ် မကောင်းပေမယ့် ငါ့အပေါ်တော့ ကောင်းရှာပါရဲ့။ ပြီးခဲ့သဲ့ နှစ်နှစ်လောက်က အရီးကို စကားတစ်ခွန်း ပြောဖူးသယ်။ ငါ့ဝမ်းထဲ ငါထားခဲ့သဲ့ စကားပါအေ။ တစ်ဖက်နား မရောက်ကောင်းသဲ့ စကားပါ”
“ပြောပါ အရီးရဲ့။ မအိမ်ကံ သည်းခံနိုင်ပါသယ်”
“အော်...မအိမ်ကံနဲ့ သူနဲ့ ဖြစ်ခဲ့သဲ့ ကိစ္စဟောင်းကို ပြောသာပါ။ ငါ့ဘ၀မှာအေ ဆင်းရဲတုန်းကလည်း ဆင်းရဲ ခဲ့ပါရဲ့။ ချမ်းသာတော့လည်း သူတကာ့ ခေါင်းပေါ် မော်ခဲ့ရပါရဲ့။ ဒါပေမယ့် ကန်တော့ပွဲရွက်ပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှ မတောင်းပန်ခဲ့ ရဖူးဘူးတဲ့။ သာအောင် တစ်ချက် မှားသာနဲ့ ငါ့မလဲ ဗန္ဓရ သရက် ပိုးချက်မကင်း ဖြစ်ရသယ်။ ငါ့တစ်သက် မကျေဘူးတဲ့”
“တစ်သက်မကျေတော့ နှစ်သက်ပေါ့ အရီးရယ်။ မအိမ်ကံ မမှားဘူး။ သူတို့မှားသာ။ မအိမ်ကံကတော့ ကျေခဲ့ပါပြီ။ အခုတစ်ခါ အိုးကွဲ ရေမလုံ ဖြစ်ရပြန်ပြီကော”
အရီးကြာညွန့်က မအိမ်ကံ ဘယ်လိုကြောင့်သည် အကြောင်း စုံစမ်းခိုင်းမှန်းလည်း မသိ။ ရွာကျောင်း မီးရှို့ခံရတာနှင့် ဆက်စပ်သည်လို့လည်း မထင်။ မအိမ်ကံကလည်း အကြောင်းရင်းကို မပြော။ အရီးညွန့် ရက်ကန်းရုံဘက် ထွက်သွားတော့လည်း မအိမ်ကံ ထင်းပုံပေါ်မှာပဲ ဆက်ထိုင်နေမိပါ ၏။ သမီးနှစ်ယောက် ပြေးလာကြပြီး ထင်းပုံပေါ်တက်ကြတော့မှ အတွေးလည်း ပျက်ရတော့သည်။ သေချာခဲ့ပြီ။ မအိမ်ကံ ကျောင်းကို ကြီးတော်စံရွှေတို့ လုပ်ကြံခဲ့ကြပြီ။ သာအောင် ပါလေသလား၊ မပါလေသလား မသေချာပေသိ သူလည်း သုံးခွက် တစ်ခွက်တင်။ မအေလုပ်သည့် အမှုတွင် ရွာ့မျက်နှာ မထောက်ဘဲ ရေငုံနေခဲ့ခြင်းကိုက အပြစ်ရှိခဲ့ပြီ။ ရွာ့အစည်း အဝေးညက နှုတ်ဆိတ်နေခဲ့သည်။ ရွှေမှုံကကော ဘာထူးသလဲ။ တစ်နွယ်ငင် တစ်စင်ပါဆိုသလို လင့်စက်ရိပ် ခိုပြီး မတရားမှုမှာ မြင်းညိုကျိုင်း မလန့် ရှိခဲ့သူပင်။
ရွာရပ်အပေါ် ငွေတိုးကြေးတိုးချေး စားရင်း မတရားမှု ဖြင့် ချမ်းသာကြွယ်ဝလာသော ကြီးတော်စံရွှေ။ သားလုပ်သူ သာအောင်ကကော ဘာထူးလဲ။ တောသူတောင်သားများ၏ ကျေးဇူးရှင် နွားတွေကို ကုန်ပစ္စည်းသဖွယ် သဘောထားပြီး နွားအလဲ အထပ်လုပ်ရင်း စီးပွားရှာသူ။ သင်းတို့တစ်တွေမှာ ဘယ်စိတ်ကောင်း နှလုံးကောင်း ရှိနိုင်ကြမှာလဲ။
Posted by Ree Noe Mann at 8:10:00 PM4comments:
ဘာရယ်မဟုတ် အမှတ်တရအနေနဲ့ အမှတ်တရ ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
20 Oct 09, 00:39
မချစ်ရ: လင့်လာယူသွားတယ်နော် မောင်လေးရေ
19 Oct 09, 23:54
မိုးခါး: လာလည်ပါတယ် အကိုတော်ရယ် အကိုတော်ကဖြင့် အသစ် မတင်ပဲနဲ့များ .. :D
19 Oct 09, 22:45
မချစ်ရ: လာလည်ပါတယ် ဒေါသအကြောင်းလေးဖတ်သွားတယ်
19 Oct 09, 21:51
မေသူ: အစ်ကိုတော်ကြီး ညီမလေးလာဆရာလုပ်သွားတယ် :P
19 Oct 09, 21:28
လင်းဦး(စိတ်ပညာ): လာရောက်ဖတ်ပါကြောင်း :D
19 Oct 09, 21:19
yu ya: ရောက်တယ်ကိုရီနိုရေ..
19 Oct 09, 20:28
19 Oct 09, 20:23
ုkom: ဒေါသထွက်နေရင် ခဏငြိမ်နေလိုကတာအကောင်းဆုံးပါ။
19 Oct 09, 20:03
myatwunnyo: ကိုရီနိုရေ.. အားပေးသွားတယ်နော်..
ဒဏ္ဍာရီ: မင်္ဂ်လာပါ။ အိမ်လည်ရောက်တယ်။
19 Oct 09, 03:55
ကဗျာဦး: ရောက်စ့် :P :P :P :P :P
ညီညီ: ကိုရီနိုရေ. လာမန့်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
18 Oct 09, 22:40
ဒဏ္ဍာရီ: ဟုတ် ပြင်ဆင်ပြီးကြောင်းး)
18 Oct 09, 22:34
ဒဏ္ဍာရီ: လင့်ပြီးကြောင်း သတင်းလာပို့တာပါ။း)
ဒဏ္ဍာရီ: အိမ်လည်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဘလောဂ့်အသစ်လေးမှ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
16 Oct 09, 17:44
မိုးစက်အိမ်: စာလာဖတ်သွားတယ် အစ်ကိုရေ
16 Oct 09, 13:27
ma phyu: ree noe, lar read twar par tal. tks for this good post
ဗညားရှိန်: ရောက်လှည့်ပါတယ် ကိုရီနို
16 Oct 09, 08:02
မြူးလေး: ကိုကြိးးးရောက်စ်
Angel Shaper: ရောက်တယ် ကိုရီနိုကြီးရေ...........
15 Oct 09, 13:26
Waing: အလည်ရောက်စ် စာတွေဖတ်သွားတယ်
မေသူ: အကိုကြီး ရိန်နို ရေ ရောက်ပါကြောင်း
15 Oct 09, 05:12
Angel Shaper: ရောက်ပါတယ်ဗျ
15 Oct 09, 02:08
ချမ်းလင်းနေ: အကိုရေ မင်္ဂလာပါ ဗျာ။ လာလည်သွားပါတယ်။ ကိုယ်ယောင်ပျောက်ဆေးလဲ လာသောက်ပါဦးဗျာ။
15 Oct 09, 02:03
kiki: ရောက်ပါကြောင်း ..ကို ရီ နို ကြီး ရေ ....း)
15 Oct 09, 00:55
ကိုလူထွေး: ရောက်စ်စ်စ်တယ် ရီငိုရေ...
15 Oct 09, 00:49
PK: www.promyanmar.com ဒီ site မှာလည်းကောင်းတာလေးတွေရှိပါတယ်..
ဆောင်းနှင်းရွက်: အိမ်လည် မလာလို့ လာကြည့်တာ ... :lol:
14 Oct 09, 19:05
မေတ္တာရောင်ပြန်: လွမ်လို့ လာလည်သွားတယ်။
14 Oct 09, 18:00
စည်သူ: ရောက်တယ် ကိုရီနိုရေ...
14 Oct 09, 17:28
မငုံ: ရီနိုရေ..ရောက်စ် :)
14 Oct 09, 16:01
TNT: Ko Reno, Thanks for your wish. Don't be disheartened, Bro... There is the cupid for who is lovely and enthusiastic. :)
14 Oct 09, 13:53
14 Oct 09, 11:18
ဗညားရှိန်: ကိုရီနိူရေ ပြန်တဂ်လိုက်တယ်ဗျာ နောက်ကျတဂ်ပေါ့ဗျ
14 Oct 09, 11:01
မိုးကုတ်သား: သေချာရှာ။ တက်ဂ်ထားတယ်လေ
14 Oct 09, 09:13
တောင်ပေါ်သား: အကိုရေ မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါ အလည်လာပါတယ်ဗျို့
14 Oct 09, 05:56
Angel Shaper: ရောက်တယ် အကိုရေ...အဆင်ပြေပါစေကြောင်းးးးးးးးးးးးးးးး
14 Oct 09, 02:04
မိုးကုတ်သား: နာမည်တပ်ပီး မတက်ဂ်ထားဘူး။ လာဖတ်ပီး မရေးရသေးတဲ့ သူတွေတိုင်းကို တက်ဂ်တာလေဗျာ။ ရေးရမယ်။ ဒါပဲ။
13 Oct 09, 22:17
မိုးစက်အိမ်: အစ်ကိုရေ ဘာတွေလုပ်နေလည်းဗျို့. . . အိမ်လိုက်လည်နေတာတော့ တွေ့ တယ် . . . :D
12 Oct 09, 21:01
12 Oct 09, 12:08
တောင်ပေါ်သား: အကိုရေ မပျောက်ပါဘူး အလည်လာပါတယ်း)
10 Oct 09, 16:44
ချမ်းလင်းနေ: ကိုရီနိုရေ မင်္ဂလာပါ။ လာလည်သွားပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ။
10 Oct 09, 11:35
kyaw kyaw: စာရေးသားဒါတွေကိုတော့ကြိုက်တယ်ဗျ...
10 Oct 09, 08:56
ကိုရဲ: ရောက်စ် ဘရားသားး)
9 Oct 09, 18:30
ဂျေဂျူဝိုင်: ဘုရားရှင်၏ စကားအရ ဖြေရှင်းခြင်း
9 Oct 09, 14:42
ရေတမာ: အကိုရေ စိတ်ရှုပ်နေလို့ဗျာ။ ဒီနေ့မှ ပျော်လို့ အိမ်လိုက်လည်နေတယ်
9 Oct 09, 11:48
Dr. Nyan: ညီလေးရေ။ ခုမှဘဲရောက်ဖြစ်တော့တယ်။ Parkကဆိုင်မှာဒုက္ခရောက်ကြတာတွေးမိပြီးရီနေမိတယ်။ စလုံးမှာထပ်တွေ့ကြဦးမယ်လေ။
9 Oct 09, 09:19
နှင်းဆီပန်းချစ်တဲ့သူ: ငြိမ်ဆို စက်ပျက်နေတာ ဆိုင်မှာဘဲရှိသေးတာကိုးးးးးးး ပြန်မရသေးလို့
9 Oct 09, 06:49
Angel Shaper: ရောက်စ့်ပါတယ်ဗျိုးးးးးးးးးးးးးးး
9 Oct 09, 02:25
sangpi: ရောက်တယ်ဗျာ ကောင်းတယ်။
9 Oct 09, 01:25
မိုးသွေးငယ်: အင်း ညီ အကို လာလည်ပါတယ်။အလုပ်တွေ အဆင်ပြေပျော်ရွှင် ပါစေ ညီ။
8 Oct 09, 23:44
ညီညီ: ကိုကြီး ရီနိုရေ. မတွေ့တာတောင်ကြာပေါ့နော်. လာလည်တယ်ဗျယ စာတွေဖက်သွားတယ်ယ လာလည်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
8 Oct 09, 22:18
moe moe: လည်လည်လာပြီးစာဖတ်ပါတယ်...
8 Oct 09, 21:52
မိုးစက်အိမ်: မဖတ်ရသေးတဲ့ ကဗျာတွေ လာဖတ်သွားတယ် အစ်ကိုရေ
8 Oct 09, 16:35
Lalique: Hello friend from Turkey
8 Oct 09, 15:46
Waing: လာလည်ပါတယ် ဇာတ်လမ်း အပိုင်း၁ကနေ ၃ကို အချိန်ရရင်လာဖတ်ဦးမယ်
8 Oct 09, 11:29
နှင်းဆီပန်းချစ်တဲ့သူ: ဟွမ်းးးးးးး မပြောချင်ဘူးတော်
8 Oct 09, 06:57
Angel Shaper: စာလာဖတ်တယ်အကို။ ပျော်ရွှင်ပါစေနော်
8 Oct 09, 01:46
ရန်ကုန်သား: အစ်ကိုရေ ညီရောက်တယ်ဗျို့:))
7 Oct 09, 14:19
jr.လွင်ဦး: အလည်ရောက်ခဲ့ မန့်ခဲ့ပါတယ် ကိုရီနိုမန်ရေ။ ကောင်းသောနေ့ပါ။း)
7 Oct 09, 10:31
Waing: လာလည်ပါတယ် လင့်ကိုမနည်းလိုက်ရှာထားရတယ် :)
7 Oct 09, 10:28
နှင်းဆီပန်းချစ်တဲ့သူ: ရောက်တယ် နော်
7 Oct 09, 06:57
Angel Shaper: အကိုရေေ၇ာက်ပါတယ်နော်
7 Oct 09, 01:49
မြူး: ကိုကြီး စာလာဖတ်တယ်သိလား
7 Oct 09, 00:13
F@LL3N: အမေချစ်တဲ့/အမေ့ကိုချစ်တဲ့သား အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ပါစေ
F@LL3N: ကျနော်ရောက်တယ် ဖတ်တယ် မန့်တယ် ကျနော့်အစ်ကိုရေးးး
6 Oct 09, 23:09
ချမ်းလင်းနေ: အကိုရေ နေဝန်းထွက်ရာမြေသို့ (၂)ကို လာအားပေးပါဦးခင်ဗျာ။
ချမ်းလင်းနေ: အကိုရေ လင်ယူသွားတယ်။ခွင်ြံ့ပုပါ။
6 Oct 09, 16:08
ဂျပန်ကောင်လေး: မရေးတော့ဘူးဆိုလို့လေ.. အခုတော့လည်း အစ်ကိုက စာတွေရေးနေပါ့လား..း)
6 Oct 09, 00:46
မိုးသွေးငယ်: ရောက်တယ် ညီရေ။
5 Oct 09, 23:26
5 Oct 09, 23:25
မော်ကွန်းသစ်: ကျေးဇူးပါ။့ ကျန်းမာပါစေပေါ့။www.newmawkun.blogspot.com
5 Oct 09, 22:05
မိုးစက်အိမ်: အစ်ကိုရေ ဘာတွေလုပ် အဆင်ပြေရဲ.လားဗျ
5 Oct 09, 18:02
ဆောင်းနှင်းရွက်: အရှုပ်တွေ လုပ်ပြီး အလုပ်တွေ ရှုပ်နေလို့ ... ခုတော့ တွေ့တယ် ဟုတ် .. :glad:
5 Oct 09, 00:41
5 Oct 09, 00:35
ရန်ကုန်သား: ပျော်ရွှင်ပါစေ အစ်ကို ရီနိုရေ :))
ရန်ကုန်သား: ဟတ်ယတ်အစ်ကို ခုတော့ အိုကေနေပါပြီ ဖလူလေ ကိုက်ချက်နှယ် ကွေးနေတာပဲ :)) ကျေးဇူးအစ်ကို
4 Oct 09, 19:49
စိမ်း: အို ဒါဆိုလည်း ဆရာမခင်ခင်ထူးရဲကလက်ရာကို မိတ်ဆက်ပေးလို့ ကျေးဇူး အဟုတ်ကြီးကောင်းတာ... အရင်က တစ်ခါမှမဖတ်ဖူးဘူး
4 Oct 09, 16:06
ကိုလူထွေး: နေကောင်းပါစ ရီနိုရေ...
4 Oct 09, 15:07
ချမ်းလင်းနေ: ကိုရီနိုးရေ သီတင်းကျွတ်အခါသမယမှာ ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ။
4 Oct 09, 14:16
jr.လွင်ဦး: ပြန်လာလည်ပါတယ်ရှင်။ လာလည်သွားတာ ကျေးဇူးပါ။း)
4 Oct 09, 13:43
ဗညားရှိန်: ကိုရီနို ရေ ရောက်တယ်ဗျာ မဂ်လာပါ
4 Oct 09, 12:46
kp3: visit bro, greatsite,
kp3: xiait, bro greatsite,
4 Oct 09, 11:31
နှင်းလေး: လာလည်ပါတယ် စာတွေလည်းဖတ်သွားပါတယ် ပျော်ရွှင်စရာအားလပ်ရက်လေးဖြစ်ပါစေ
4 Oct 09, 01:35
မငုံ: ရီနိုရေ..အေးချမ်းတဲ့ သီတင်းကျွတ်အခါသမယလေးပါ
3 Oct 09, 15:37
ရန်ကုန်သား: အစ်ကိုရေ မင်္ဂလာရှိသော သီတင်းကျွတ်အခါသမယပါ :))
3 Oct 09, 01:19
yu ya: ရောက်တယ် ကိုရီနိုရေ.. ဆက်ှေလျှာက်...ပါလို့။
2 Oct 09, 11:21
kiki: ဆက်သာလျှောက်ပါ ကိုရီနို ရေ..
2 Oct 09, 09:10
ရေတမာ: အကိုရေ လာလည်တယ်
1 Oct 09, 23:16
1 Oct 09, 10:36
1 Oct 09, 09:49
Angel Shaper: ကိုရီနိုကြီးရေ...ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ....
1 Oct 09, 08:30
1 Oct 09, 07:32
မြူး: ရောက်တယ်နော် ကိုကြီး
30 Sep 09, 23:31
yu ya: ရောက်တယ် ကိုရီနိုရေ... အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ။
30 Sep 09, 23:16
စိမ်း: ရောက်ခဲ့ပါတုယ် ပထမဦးဆုံးထင်တယ်...
မိုးစက်အိမ်: လာသွားတယ် အစ်ကိုရေ
Angel Shaper: ရောက်ပါတယ်ဗျိုးးးးးးးး
30 Sep 09, 12:02
မေတ္တာရောင်ပြန်: အိမ်လည်ရောက်တယ် မောင်လေး
30 Sep 09, 09:51
မေသူ: ကိုကြီး ရီနိုရေ စာတွေပြန်ရေးနေတာ ဝမ်းသာပါတယ်... မေသူ လင့်သွားတယ်နော... အစ်ကိုလာကော်မန့် ပေးလို့ လဲ ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း..... :)
29 Sep 09, 19:34
ရန်ကုန်သား: အစ်ကိုရီနိုရေ ရောက်တယ်ဗျို့:))
မေတ္တာရောင်ပြန်: HAPPY BIRTHDAY MGLAY
29 Sep 09, 16:16
စည်သူ: ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ.. ဆုမွန်ချွေပါတယ်
29 Sep 09, 16:15
29 Sep 09, 16:09
29 Sep 09, 14:06
အနမ်း: ရီနိုရေ .. ရောက်ပါတယ်။ အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ပါစေ။
ဆောင်းနှင်းရွက်: ကောင်းသောနေ့လည်ခင်းလေးပါ .. ဖတ်ဖို့အတွက် လင့်ခ် ယူသွားတယ် .. :D
29 Sep 09, 13:04
ရေတမာ: အကိုရေ လာလည်ဒယ် မုန့်ကျွေး
29 Sep 09, 11:09
မိုးခါး: မောနင်း ပျော်ရွှင်ဖွယ် နေ့ရက်များပိုင်ဆိုင်ပါစေး)))
29 Sep 09, 08:50
28 Sep 09, 23:45
28 Sep 09, 21:51
မိုးခါး: ရောက်ပြီး ဖတ်ပြီးတာကြာပေါ့ .. မမန့်ဖြစ်သေးတား)))
28 Sep 09, 11:38
မေတ္တာရောင်ပြန်: မောင်လေးရေ အိမ်လည်ရောက်တယ်။
27 Sep 09, 17:53
ဝါကြီး: အင်း..အားဆေးက တော်တော်ကောင်းတယ်..
27 Sep 09, 17:07
ワーワー: visited. :D
27 Sep 09, 05:30
မငုံ: ရောက်လာပါတယ် ရီနိုရေ
27 Sep 09, 00:44
JulyDream: အလည်တခေါက် ရောက်ခဲ့ပါတယ် ခင်ဗျာ။
27 Sep 09, 00:43
TNT: အားလို့ ကြုံရင် စကိတ်စီး လေ့ကျင့်ကြရအောင်လေ ဘရားသား
27 Sep 09, 00:34
27 Sep 09, 00:30
yu ya: ရောက်တယ် ကိုရီနိုရေ.. ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေခင်ဗျာ..
26 Sep 09, 23:28
Nwe Ni: I am happy to read your blog again. Thnks
26 Sep 09, 22:25
မိုးစက်အိမ်: :cool: ;)
26 Sep 09, 21:54
တောင်ပေါ်သား: ပြန်လာပြီလား ၀မ်းသာတယ်ဗျး) အစစအရာရာ ပျော်ရွှင်ပါစေ
26 Sep 09, 21:32
Angel Shaper: ၀မ်းသာလိုက်တာဗျာ...
26 Sep 09, 20:44
ရန်ကုန်သား: ဟာ အစ်ကို ဝမ်းသာတယ်ဗျာ :)
26 Sep 09, 20:42
၀သန်မိုး: ဘလော့ဂ်ပြန်ဖွင့်ပြီကွ ဝေးးးးးးးးးးးးး
25 Sep 09, 17:36
Posted by Ree Noe Mann at 9:57:00 PM 17 comments:
မင်းနဲ့ ကိုယ်စကား စပြောဖြစ်ကြတာလဲ
ဒီလမ်းလေးထဲမှာပဲ .... ချစ်သူ
ကိုယ့်ကို ရင်ခုန်သံတွေ မြန်စေခဲ့တာလဲ
ဒီလမ်းလေးထဲမှာပါပဲ .... ချစ်သူ
ဒီလမ်းလေးထဲမှာပဲ .... ချစ်သူ
ဒီလမ်းလေးထဲမှာပဲပေါ့ .... ချစ်သူ
ချစ်သူ .... ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့
Posted by Ree Noe Mann at 9:20:00 PM 21 comments:
Posted by Ree Noe Mann at 7:50:00 PM 25 comments:
Posted by Ree Noe Mann at 10:20:00 PM2comments:
ဒီတစ်ခေါက်တော့ ကျနော် တွေ့ရှိမိတဲ့ ဘုရားရဲ့ ကျင့်စဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး တစ်ခုလောက်သတိထားမိလို့ ပြန်လည်မျှဝေတယ်လို့ ပဲသဘောထားပေးကျပါ။ သိလို့ တက်လို့ ပြောခြင်းမဟုတ်ပါ။ မျှဝေခြင်း မျှသာဖြစ်ပါသည်။
တစ်နေ့ ဘလောဂ့်ဂါအမတစ်ယောက်နဲ့ အတူ Bukit Batok မှာရှိတဲ့ ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခရဲ့ တပည့်ရင်းဖြစ်တဲ့ ဆရာမနှင်းဧရာလွင် ဆီကိုရောက်သွားကြပါတယ်။ ဆရာမအိမ်ကိုေ၇ာက်တော့ ဆ၇ာမက ခင်ပွန်းကြီး ၁၀ပါးကို ကန်တော့ဖို့ အတွက်ပြင်ဆင်နေတာကို တွေ့ရတယ်။ ကျနော်တို့ ရောက်ပြီး ဘုရားဝတ်ပြုပြီးတော့ ဆရာမက ကျနော်ကို မျက်နှာစိမ်းမှန်းသိတော့ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို လှမ်းပေးပါတယ်။ ကျနော်လည်း အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ သိမ်းထားလိုက်တယ်။
ကွန်ပျုတာကလည်း ပျက်၊ အလုပ်ကလည်း ပါးဆိုတော့ သိမ်းထားတဲ့ စာအုပ်လေးကို ဖတ်မယ်ဆိုတော့မှ ပိုင်းလော့ဆရာတော် အရှင်ဇေယျပဏ္ဏိတ ဟောကြားထားတဲ့ ကျေးဇူးပြစ်မှား ဒဏ်ဆယ်ပါးနှင့် ခင်ပွန်းကြီးဆယ်ပါး ကန်တော့ခန်း စာအုပ်လေးထဲမှ ကျနော် မသိတာလေးတွေကို သိလိုက်ရတယ်။ တစ်ချို့စကားလုံးဆိုရင် ကြားဖူး၊ ပြောဖူးပေမယ့် စကားရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို သေသေချာချာ မသိခဲ့ပါဘူး။ ဆရာတော်ရဲ့ ဒီစာအုပ်လေးကို ဖတ်လိုက်ရတဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် ကျနော် မသိသေးသော အသိတွေကိုရရှိလိုက်ရပါတယ်။ စာအုပ်ထဲမှာလည်း ဆရာတော်ရဲ့ တကယ့်ကိုယ်တွေ့တွေကိုလည်း သိရှိခွင့်ရလိုက်ရတဲ့ အတွက် ကျနော် မှာ ဗဟုသုတ တိုးပွားစေခဲ့ပါတယ်။
ဒီစာအုပ်ထဲမှ ကျနော် ပြန်လည်မျှဝေချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကတော့ ဘုရားဖြစ်ဖို့ရာ ကျင့်ကြံ့ခဲ့တဲ့ ကာလလေးတစ်ခု အကြောင်းပါ။ ကျနော်တို့ သိထားပြီးဖြစ်တဲ့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား ဟာဆိုရင် သဗ္ဗေညုရွှေညာဏ်တော်ကို ရဖို့ရာ လေးသင်္ချေ နဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်း ကျင့်ကြံလာခဲ့ပြီးမှ လောကမှာ အတုမရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား အဖြစ်ကို ရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ခုကျနော် ပြောချင်တာကလည်း ဒီ လေးသင်္ချေ နဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်း ဆိုတဲ့ ကာလကို ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျနောတို့ နှုတ်ကနေ အလွယ်တကူ ပြောထွက်လာတဲ့ ဒီ လေးသင်္ချေ နဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်း ကို ကျနော်တို့ သေသေချာချာသိလို့ ပြောနေကျတာလား ? ကြားဖူးလို့ ပြောနေကျတာလား ဆိုတာတော့ ကိုယ့်ကိုတိုင် ပဲ ပြန်မေးကြည့်ပါ။ လေးသင်္ချေ ဆိုတဲ့ အရေအတွက်ကို သိသွာရင်း ဘုရားရဲ့ ပါရမီကို အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်သွာပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ မြန်မာ သင်္ချာမှာတောင် ကုဋေ ထိသာကြားဖူး သင်ဖူး တာပါ။ သင်္ချေ ဆိုတဲ့ အရေအတွက်ဟာ ၁ရဲ့ နောက်မှာ သုည အလုံးရေပေါင်း ၁၄၀ ရှိတယ်လို့ ဆရာတော်က ဟောကြားခဲ့တယ်။ လေးသင်္ချေ ဆိုတော့ ၄ ရဲ့ အနောက်မှာ သုည အလုံးပေါင်း ၁၄၀ရှိမယ်။ ဒါတွေဟာ ခုနှစ်တွေ မဟုတ်ဘူးနော်။ ကမ္ဘာလုံး အရေအတွက် ကိုပြောတာ။ ကမ္ဘာလုံး အရေတွက် လေးသင်္ချေ နဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်း နေထိုင်ကျင့်ကြံ လာပြီးမှ လောကမှာ တုနှိုင်းစရာမရှိတဲ့ တစ်ပါးတည်းသော ဗုဒ္ဓုမြတ်စွာဘုရားဆိုတာကို သိရှိနားလည်ခဲ့ရတယ်။
တစ်ကမ္ဘာ ကိုဘယ်လောက်ကြာပါသလဲလို့ မေးတော့ ဘုရားရှင်က ယခုလိုဖြေကြားခဲ့တယ်။ ` ချစ်သားတို့ အလျား (၁၂) မိုင်၊ အနံ (၁၂) မိုင်၊ အမြင့် (၁၂) မိုင်ရှိတဲ့ ကန်ကြီးထဲကို မုံညင်းစေ့ အပြည့်ထည့်ပြီး အနှစ် (၁၀၀)ကြာမှ မုံညင်းစေ့ တစ်စေ့ဖယ်မယ်။ ထိုမုံညင်းစေ့များ ကုန်သွားသောကာလသည် တစ်ကမ္ဘာခန့် ဟုမှတ်တဲ့ ` ဘုရားရှင်တော်မြတ်က ဒီလိုမိန့်တော် မူခဲ့တယ်။
သံသရာဆိုတာ ပြတ်တယ်မရှိဘူး။ ဒါကြောင့် ဘုရားရှင်ဟာ သတ္တာဝါတွေရဲ့ ဘဝအစကို မဟောဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အချိန်မပေးနိုင်တာ။ ဘုရားရှင်ဟာ လူဘဝ အစနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ယခုလိုလဲ ဟောခဲ့ပါသေးတယ်။
ချစ်သားတို့- လူတစ်ယောက်ရဲ့ အကြောင်းကို နောက်ဆုတ်တွေးလိုက်ရင် ငါဘုရား (၄၅) ဝါ ပြည့်တာတောင် အစရောက်မှာ မဟုတ်ဘူး `တဲ့။ အချိန်ပေးရတယ်။ ဒါကြောင့် ဘုရား မဟေားဘူး။ အကျိုးမထူးလို့တဲ့။
ကိုယ်မမြင်တာကိုလည်း ဖြီးဖြန်းပြီး မဟောဘူး။ အထင်နဲ့လည်း မဟောဘူး။ လိုအပ်ရင်တော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ဘယ်လောက်က ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်။ သံဝေဂရအောင်၊ တရားရအောင် တော့ ဟောတယ်လို့ ဆရာတော်ကြီးများလည်း အမိန့်ရှိခဲ့တယ် ဆိုတာကိုသိခဲ့ရပြန်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကျနော်တို့နေထိုင်နေတဲ့ တိုတောင်းလှတဲ့ ဒီလူ့လောကမှာ အသက်ရှင်နေထိုင်နေစဉ် ကောင်းတာလေးတွေကို ရွေးလုပ်ကြပြီး၊ စိတ်ကောင်း နှလုံးကောင်းလေထားပြီး လူ့လောကကြီးကို အကောင်းမွန်ဆုံး ဖြတ်သန်းသွားနိုင်ကျပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း……………..
Posted by Ree Noe Mann at 11:34:00 PM 13 comments:
မီးတွေက တစ်ရွာလုံးကို ကူးစက် လောင်ကျွမ်းနေသည်။ မီးပင်လယ်ကြီးလို တပြင်တပြန့်ကြီး လောင်နေခြင်း ဖြစ်၍ ရွာသူရွာသားတွေက ဆောက်တည်ရာ မရကြဘဲ မီးဘေးလွတ်ရာ ပြေးနေကြလေ၏။ မအိမ်ကံလည်း သမီး နှစ်ယောက်ကို လက်ဆွဲရင်း ပြေးနေရသည်။ ဇောင်ချမ်းကုန်း၊ ဇောင်ချမ်းကုန်း။ အော်သံတွေက ငရဲပွက်နေကြပါ၏။ မအိမ်ကံ အာရုံထဲမှာ ရှုပ်ထွေးနေသည်။
လူပေါင်းများစွာက ခေါ်နေတာကို ကြားသော်လည်း မအိမ်ကံ ပြေးနေရဆဲ ဖြစ်ပါ၏။ ထိုစဉ်မှာပင် အေးမြသော ရေတွေ မျက်နှာကို လာစင်သလို ခံစားလိုက်ရသည်။ မီးတောက်မီးလျှံတွေပါ ငြိမ်းကုန်ကြသလို အသံတွေလည်း တိတ်ဆိတ်သွားပါ၏။ ပရိတ်တော်ရေ၊ ပရိတ်တော်ရေ ဆိုသည့် အသံကို အဝေးကြီးက ပြောနေသလို ကြားနေရသည်။
မအိမ်ကံ မျက်လုံးတွေ ပွင့်လာခဲ့သည်။ ရင်ထဲမှာ အသည်းတွေ အူတွေ တလှပ်လှပ် ခုန်နေကြပါ၏။ အမေ ပန်းရုံနှင့် မလှအုံက ပရိတ်တော်ရေဖြင့် ခေါင်းကို သပ်နေကြသည်။ မျက်နှာသစ် ပေးနေကြသည်။ အေးမြလိုက်သည့် ပရိတ်တော်ရေ။
မျက်နှာပေါင်းများစွာ ငုံ့ကြည့်နေကြတာကို မအိမ်ကံ မြင်နေရပါ၏။ အမေ ပန်းရုံ၏ မျက်ရည်ပေါက်တွေ မအိမ်ကံ ပါးပေါ် တပေါက်ပေါက် ကျနေလေသည်။ မအိမ်ကံ၏ စီးကျလာသော မျက်ရည်တွေကတော့ ခေါင်းအုံးပေါ် တသွင်သွင်။ ဘေးမှာ လာရပ်ကြသမျှသော ဆွေမျိုးတွေ အားလုံးမှာလည်း မျက်ရည်တွေ အလူးလူး ရှိကြပါ၏။ ပွဲခင်းဆီက ဆိုင်းသံတွေ ဝေ့ခနဲ ကြားနေရသည်။ ပွဲကို ထိန်းလိုက်နိုင်ပုံရသည်။ ဒါကိုတော့ မအိမ်ကံ ၀မ်းသာသွားသည်။ သတိကောင်းကောင်းရပြီ ဖြစ်သော်လည်း နှလုံး ခုန်တာတွေ ငြိမ်သွားအောင် မျက်လုံး မှေးရင်း ငြိမ်နေလိုက်သည်။ မလှအုံ၏ အန္တရာယ်ကင်း ပရိတ်ရွတ်သံ ဝေး၍ ဝေး၍ သွားပြန် လေသည်။
မအိမ်ကံတို့ ၀ိုင်းတိုက်ထဲမှာ လူလေးငါးခြောက်ဆယ်လောက် ရှိနေကြသည်။ အိမ်ရှေ့ကွက်လပ်တွင် ဖျာကြမ်းတွေ ခင်းထားသော်လည်း လူများသည့် အတွက် တချို့က ဖုန်ထဲမှာပဲ ထိုင်ကြသည်။ စိတ်ဝင်စားကြသော ရွာသူရွာသား တချို့နှင့် ရွာလူကြီးသူမ နှစ်ယောက် သုံးယောက်ပါ ရှိနေကြပါ ၏။ ရွာခေါင်းဆောင် သာအောင်နှင့် ကင်းမှူး စံကောင်းတို့က ကိုပြေသိမ်းနှင့် အတူ ထိုင်လျက်ရှိကြသည်။ ဘုန်းကြီးပျံပွဲကြီး ပြီးသွားတာ တစ်ပတ်ကျော်ခဲ့လေပြီ။ ဆိုင်ရာ ငှားရမ်း ထားရသော ပစ္စည်းတွေ ပြန်တိုက်ပို့ရသည့် အတွက် ရွာလှည်းတိုင်း ကုသိုလ်ပါခဲ့ကြရသည်။ တည်းကျောင်း မဏ္ဍပ်များ အတွက် ငှားရမ်းထားသော တိုင်များ၊ ၀ါးများ၊ ထန်းလက် များက အစ များလှစွာသော ပစ္စည်းတွေ ဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာ ရွာတွေကို ရောက်အောင် ပို့ကြရသည်။ ရွာလည်း ပန်းကြလှပြီ။ ငွေကြေး အလှူဒါနပြု သည့်အထဲ ထည့်ဝင်ကြရ သကဲ့သို့ လုပ်အား ဒါနတွေလည်း ပေးခဲ့ကြရပါ၏။
ရွာ့ကိစ္စ မဆွေးနွေးရသေးတော့ အားလုံးအားလောက်သည့် ညနေပိုင်းတစ်ပိုင်းမှာ သာအောင်က လူစုပေးခဲ့သည်။ ကျောင်းမီးလောင်သည့် ညက ကင်းတာဝန်ကျကြ သူတွေပါ ဆင့်ခေါ်ထားကြသဖြင့် ရွာက အဖြစ်မှန်ကို သိချင်နေကြ သူများပီပီ တဖွဲဖွဲ ရောက်လာကြသည်။ ရွာကင်းက ကင်းမကြီး လေးကင်းရှိသော်လည်း ကြားကင်းတွေလည်း ဖြိုးဖြိုးဖြောက်ဖြောက် ဆောက်ထားတာ ရှိသည်။ တောင်ကင်းက ကင်းမွှေလျှင် မြောက်ကင်းက ကြားနိုင်ဖို့ မလွယ်သဖြင့် ကြားကင်း ထားရခြင်း ဖြစ်၏။ ကြားကင်းသမားတွေလည်း ပါကြရသည်။ ထိုညက ပထမဆုံး သံချောင်း မွှေခဲ့သူမှာ ဖိုးညောင်းဖြစ်သည်။ ဖိုးညောင်း အသံကို ၀ိုင်းတိုက်ထဲမှာ အကျယ်ကြီး ကြားနေရသည်။ မအိမ်ကံတို့ အမျိုးသမီး တစ်သိုက်က အိမ်ပေါ် ၀ရန်တာမှာ ထိုင်နေကြသော်လည်း ကြားနေရပါ၏။
“အဲသည့်ညနေက ကျုပ်နဲ့ အတူကျသာက ငပြောင်းရယ်။ ငပြောင်းက ပွဲတော်ကွင်း အကြော် သွားဝယ်မယ်ဆိုတော့ ကျုပ်က လွှတ်လိုက်သယ်။ ကင်းစင်အောက်မှာ ရေနွေး အိုးကလည်း တည်ထားတော့ ကျုပ်လည်း မီးဆင်းထိုးပါ သေးသယ်။ အကြော်လာရင် ထမင်းစားမယ်ပေါ့ဗျာ။ ကင်းစင်ပေါ် ပြန်တက်တော့ ရွာဘက်ကို ၀င်မယ့် လမ်းမှာ ဖုန်ထ သာတော့ တွေ့သား။ ပွဲရက်ဗျာ။ ရွာပေါင်းစုံက ဥဒဟို ၀င်ထွက်နေကြသာ ကျုပ်ကလည်း သည်လိုဖြစ်လိမ့်မယ် ခေါင်းထဲကို မရှိသာဗျာ။ ရွာတံခါးကြီးကလည်း ပွဲရက် ဆိုတော့ တောက်လျှောက် ဖွင့်ထားရသာ မှုတ်လား။ ကင်းတံခါးကလည်း ဒလဟောပေါ့ဗျာ။ ခဏနေတော့ အဝေးက ဖုန်လုံးထသာတွေ့တော့ တွေ့သား။ ကျုပ်က အဝေး လှည်းတွေပဲ ထင်သာ။ ဒါနဲ့ အကြော်သွားဝယ်သဲ့ ငပြောင်း လှမ်းမျှော်နေတုန်း ၀ါးဆယ်ပြန်လောက်မှာ မြင်းနှစ်ကောင်၊ လူသုံးယောက် လှမ်းတွေ့လိုက်သယ်။ ဒါလည်း ကျုပ်က မကောင်းသူ မကောင်းသား မထင်ပါဘူး။ မြင်းနဲ့လည်း သွားလာနေကြသာကိုးဗျ။ ဒါပေသိ ကျုပ်က ကင်းစင်ပေါ်က လှမ်းတော့ မေးလိုက်သယ်။ ပွဲကြည့်လား ဆိုတော့ မဖြေဘူးဗျ။ အတင်းနှင်ကြတော့သာ။ ကျုပ်စိတ်ထဲ ပွဲကြည့်တွေပဲ မှတ်သေးသာ။ နောက်တော့ ပွဲခင်းဘက် မသွားဘဲ ရွာအရှေ့ ချိုးသွားသာ တွေ့လိုက်တော့ စိတ်ထဲ ယနမကင်းသာနဲ့ ကျုပ်လည်း ကင်းသံချောင်း ထမွှေသာပဲ”
ကိုစံကောင်းက ၀င်မေးသည်။ မျက်နှာက ခပ်မှုန်မှုန်။
“လူသုံးယောက် မြင်းနှစ်ကောင်ဟုတ်လား။ တစ်ကောင်က နှစ်ယောက်စီးသာလား”
“ဟုတ်သယ်။ နောက်မြင်းမှာ နှစ်ယောက်ပါသာ။ နှစ်ယောက်စီးသာပေါ့ကွာ”
“ဘယ် မှတ်မိမှာတုံး။ မင်းနှယ်၊ ဗြောဆို ၀င်သွားပါ တယ်ဆိုမှ”
ဖိုးညောင်းက ဒါပဲပြောနိုင်သည်။ ဒုတိယသံချောင်း မွှေသည့် ကင်းသမားက လှဦးဖြစ်သည်။
“ကျုပ်က ကိုဖိုးညောင်း သံချောင်းသံ ကြားလို့ တွန်းခေါက်သာ။ ဘာရယ် သိသာ မှုတ်ဘူး။ ကျုပ်စိတ်ထဲ ဖိုးညောင်းမူးနေသယ် ထင်သေးတာ”
“မဟုတ်သာကွာ။ ကင်းကျသခိုက်တော့ ငါမသောက် ရပါဘူး။ ဘုရားစူးရပါစေ့”
ကင်းတွေက သံချောင်းသံ ဆက်သွားအောင် မွှေနိုင်ခဲ့ ကြပါ၏။ သည်လူတွေ ဘယ်ကင်းတံခါးက ထွက်သွားကြတာလဲ။ ကိုစံမြက သူ့ကင်းက ထွက်သွားသည်ဟု ဆိုသည်။ ရွာ့မြောက်ကင်းက လမ်းတစ်ဆစ် ချိုးကွယ်နေသည့် နေရာ ဖြစ်သည်။ မြင်းနှစ်စီး ရုတ်တရက် ထွက်လာတော့မှ မြင်လိုက် ရသည်ဟု ရိုးရိုးသားသား ဖြေသည်။
“တစ်ခုတော့ ရှိသယ်။ ကျုပ်မြင်လိုက်သာတော့ မြင်းနှစ်ကောင် လူနှစ်ယောက်ပဲ။ ကျုပ်မျက်လုံးကလည်း ၀ါးတားတားရယ်။ နို့ပေသိ သေချာပါသယ်”
ကိုစံမြနှင့်အတူ ကင်းကျသူကို ဥသြကလည်း မြင်းတစ်ကောင် လူတစ်ယောက်စီပဲလို့ ဆိုသည်။ ဒါဆိုလျှင် တစ်ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့တာပေါ့။ ဘယ်သူလဲ။ ဒါကလည်း ရှာဖို့ သိဖို့ မလွယ်။ ဈာပနပွဲရက်ကြီးဆိုတော့ မြင်းပေါ်က ကျန်ရစ်သူ ဘယ်သူဆိုတာ သိနိုင်ဖို့မလွယ်။ သည်တစ်ယောက်က ဘာကိစ္စ ကျန်နေခဲ့တာလဲ။ စာသင်ကျောင်း မီးရှို့မည့်သူက ပွဲကြည့်ချင်လို့ ဆင်းနေခဲ့တာတော့ မဖြစ်နိုင်။ မြင်းပြေးရင်း မီးကွင်းပစ်ကြတာလား၊ မီးတုတ်ပစ် တင်တာလား။ ဒါဆိုရင် နောက်က ထိုင်လိုက်ခဲ့ပြီး မြင်းနှင့် ပါမသွားဘဲ ကျန်ရစ်သူသာ မီးနှင့်တိုက်သူ ဖြစ်ရမည်။ ၀ိုင်းတိုက်ထဲမှာ ရှိကြသူတွေက ကျွက်စီကျွက်စီ မြည်လာကြသည်။ တစ်ယောက်တစ် ပေါက် သဘောထားတွေ ပြောလာကြသည်။ အသံတွေက ကျယ်သည်ထက် ကျယ်လာခဲ့ပါ၏။
ကိုပြေသိမ်းအသံကြောင့် အသံတွေ ရှဲခနဲ တိတ်သွား ကြသည်။
“ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းကလေးကို မီးရှို့ချင်တာတော့ သေချာပြီ။ စဉ်းစားစရာတွေတော့ ရှိတာပေါ့ဗျာ။ သည့်ပြင် ရက်တွေ ညဘက် လာရှို့လည်း ဖြစ်သားပဲ။ ဒါပေမယ့် ရွာတံခါးက ရှိနေတယ်။ ကင်းတွေ ရှိနေတယ်။ သည်တော့ ကင်းတံခါးတွေ ဖွင့်တဲ့ ရက်ကို ရွေးကြတာပဲ”
ကိုပြေသိမ်း ပြောတာကို ရွာလူကြီးတွေက ထောက်ခံကြသည်။ သည်ဘက်ရက်တွေမှာ ကင်းတွေကို ကျကျနန စောင့်စေသည်။ ကင်းသား အလဲမှာ ကင်းအပ်ပြီးမှ လဲကြရ သည်ဖြစ်၍ လူလစ်စရာ မရှိ။ သည်ရက်ကို တမင်စောင့်ကြ ခြင်းဖြစ်လောက်ပါ၏။
“အခု ဘာတွေ့သလဲဆိုတော့ လူတစ်ယောက် ရွာမှာ ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။ ကင်းသမားတွေပြောတာ တွက်ကြည့်ရင်ပေါ့ဗျာ။ အနောက်ကင်းမက ၀င်တယ်။ မြောက်ကင်းက ထွက်တယ်။ ဟုတ်ပြီ။ ဘာဖြစ်လို့ မြောက်ကင်းက ထွက်ကြတာလဲ။ မြောက်ကင်းမှာလမ်းက တစ်ဆစ် ချိုးသွားတယ်။ နည်းနည်း ထွက်လိုက်တာနဲ့ လှမ်းမမြင်နိုင်တော့ဘူး။ ဒါကို ကြည့်ရင် ရွာအနေအထားကို သိတဲ့လူတွေ ဖြစ်ရမယ်”
ရွာမိရွာဖတစ်ဦးဖြစ်သော ဘကြီးတင်က ကိုပြေသိမ်း စကားအဖြတ်တွင် တစ်ခွန်း ၀င်ပြောလိုက်သည်။
“မောင်ပြေသိမ်းရဲ့၊ ဘကြီးပြောမယ်။ ရွာထဲမှာ တစ်ယောက် ကျန်ကျန်၊ သုံးယောက်စလုံးပဲ ကျန်ကျန်၊ အခု ဟာက မြင်းနဲ့ လာကြလို့သာကိုး။ ရွာကင်းတံခါးတွေ ဖွင့်ထားသဲ့ ရက်မှာ ခြေကျင်လာလည်း ဖြစ်သာပဲကွယ့်။ ၀င်လာနိုင်ရင် မီးရှို့နိုင်သာပဲ မဟုတ်လား” ကိုပြေသိမ်းက ၀င်ဖြေသည်။
“ဟုတ်ပါတယ် ဘကြီးပြောတာ။ မြင်းနဲ့လာတာက အကြောင်းရှိတယ် ဘကြီးရဲ့။ မြင်းနဲ့က ပြေးပြေးပစ်ပစ် လုပ် နိုင်တယ်။ လူချည်းဆိုရင် တစ်ယောက်မဟုတ် တစ်ယောက် တိုးနိုင်တယ်။ ပိတ်ဆို့ ဖမ်းနိုင်မယ်။ မြင်းကျတော့ လိုက်ဖို့ ခက်တယ်”
“အေးကွ။ မောင်ပြေသိမ်းပြောသာ မှန်သယ်”
“စောစောက ရွာအနေအထား သိတဲ့လူ ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် ပြောခဲ့တယ်။ စဉ်းစားကြည့်တော့ တစ်ရွာ့ တစ်ရွာ လမ်းသိနေကြသူတွေချည်း ဆိုတော့ ပြောရတာ ခက်တယ်။ ထားပါတော့ဗျာ။ ပဲစေ့တစ်တင်း သွန်ပြီး စုန်းပြူးကောက်ရ သလို ဖြစ်ရော့မယ်။ ကျွန်တော် စဉ်းစားတာက ဘာကိစ္စ ကျောင်းကို မီးရှို့ရတာလဲဆိုတဲ့ အချက်ပဲ ခင်ဗျ”
ထိုနေ့က စကားဝိုင်းမှာ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလှသည်။ မအိမ်ကံတို့ပင် ၀ရန်တာမှာ ထိုင်ရင်း စကား မဟခဲ့ကြ။ မအိမ်ကံ ကိုယ်တိုင်လည်း ကိုပြေသိမ်း စဉ်းစားသလို စဉ်းစားမိခဲ့သည်။ ရွာထဲက အိမ်တစ်အိမ် အိမ်ကို မီးရှို့သွားတာ မဟုတ်။ မအိမ်ကံတို့ကို ငြိုးသူဆိုရင်လည်း မအိမ်ကံတို့ အိမ်မကြီးကို လမ်းမပေါ်က မီးကွင်းပစ်ဖို့ မလွယ်။ လမ်းနှင့် အိမ်က တလင်းပြင်ကြီး ခြားနေတာ မဟုတ်လား။ သည်တော့ ကျောင်းကို ရန်ရှာသွားခဲ့တာ သေချာသည်။ သို့သော် ကိုပြေသိမ်း ပြောသလို လူမိဖို့ဆိုတာတော့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ပွဲရက် ဆိုတော့ တစ်ညလုံး ရွာတံခါးတွေက ဘယ်သူမဆို ၀င်နိုင် ထွက်နိုင်ကြတာ မဟုတ်လား။
Posted by Ree Noe Mann at 11:11:00 PM3comments:
Posted by Ree Noe Mann at 11:45:00 PM 16 comments:
Posted by Ree Noe Mann at 8:25:00 PM 1 comment:
Posted by Ree Noe Mann at 8:00:00 PM5comments:
Posted by Ree Noe Mann at 11:00:00 PM4comments:
Posted by Ree Noe Mann at 9:10:00 PM 11 comments: